दीगोपनाका लागि गीत गाउछु – भगवान भण्डारी – Himal FM 90.2 MHz
पूर्वका खबर Author April 24, 2017
शिखर गजरकोटे, सोलुखुम्बु,
लोकदोहोरी गीत गाएर चर्चाको शिखर चुमेका लोक गायक भगवान भण्डारी ७ बर्ष देखि अमेरिकामा छन् । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, उनी आफ्नो रहर भन्दा पनि श्रीमतीको रहरमा अमेरिका पुगेका हुन् । बेलाबेलामा नेपाल आउने र फाट्टफुट्ट गीत गर्ने भगवानलाई अलि धेरै नेपालमै बस्न मन छ ।
उनका खैरेनीमा गेट, फुलमा भमरा, वनमा काँडा छ, विग्रो चालपनि, मौरी फूल माथी, चैतमासको हुरीले डाली लर्कायो, लोकतन्त्रको कोपिला लाग्यो, चार दिन छुट्टी, मेरी माया आईनन् फर्केर, मनैमा पिरको भारी छ, दिलको ढोका बन्दर गरेर जस्ता गीतले लोक पारखिकको मन जित्न सफल भएको छ । बद्रि पंगेनीको परिचय निर्माण गर्ने गीत ससुरालीमा गीतको भाका समेत भण्डारीले सृजना गरेका थिए ।
उनी अमेरिका छदै खेरि उनले बाबाआमालाई गुमाएका छन् । त्यस्तै उनले गुँरास झैँ फुलेर दोहोरी गीत समेत गाएका छन् ।
बजारमा भण्डारीका सृजना कम आए नी ?
अमेरिकामा हुने स्टेज कार्यक्रममा सहभागी बनिरहेको छु तर रेकर्ड गीतमा कमी आएकै हो । म अमेरिका जानु रहर होईन, श्रीमती र परिवारको रहरलाई पुरा गर्न अमेरिका छिरेको हूँ । म नेपालमै रहेर लोक संगीतमा नयाँ सृजना गरुँ, नलागेको होईन ।
समय संगै सृजना पनि फेरिए तर तपाईको सृजना फेरिन सकेन, किन ?
त्यस्ता गीत मैले पनि बनाउन सक्छु तर मलाई जस्तो प्रकृतीको गीतवाट माया पाएको थिए । त्यस्तै गीतलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु । किनकी क्षणिक चर्चा भन्दा दिगो चर्चा नै प्यारो लाग्छ ।
मौलिकपन बोकेको गीत हजारमा हेरिन्छ भने अश्लिलता मिसिएको गीत लाखौमा हरिन्छ नी ?
हो, त्यो देखिएको छ । मौलिकता मिसिएको गीत दिर्घकालसम्म पनि रहिरहन्छ, भावी पुस्तालाई पनि गौरवका साथ देखाउन सकियो । तर अहिले लाखौ हरिने चिजको भविष्यमा कुनै महत्व रहला जस्तो लाग्दैन् । खहरेको भेलजस्तै आज आयो भोली छैन् । सृजना कालजयी बन्न सक्नुपर्छ । लाखौ हेरिने र हजारौ हेरिने गीतको कमेन्ट हेर्नुस् त वास्तविकता देखिहालिन्छ, नी ।